Sample Nkwadebe Factory - China Sample Nkwadebe Manufacturers, Suppliers
Faclọ Ọrụ Nsacha
DRK-6000 Series agụụ dryi ...
DRK-GHP Electrothermal nkwekọrịta ...
DRK-810 8-Channel ọgwụ ahụhụ ...
DRK-FX-D306 Sox Type Abụba Ex ...
DRK-FX-D302B Jụrụ-Mmiri-Free Kjeltec Azotometer
Dabere na ụkpụrụ nke usoro Kjeldahl, a na-etinye Azotometer na mkpebi nke protein ma ọ bụ ngụkọta ọdịnaya nitrogen, na nri, nri, mkpụrụ, fatịlaịza, ala ala na ihe ndị ọzọ.
1. Ngwá ọrụ ahụ na-ejikọta ọrụ ndị dị mkpa dị ka kpo oku na njikwa okpomọkụ, mmịpụta, mgbake ihe mgbaze, na ihicha, na-eme ka ọ dị mfe ịme nyocha. 2. Ghọta usoro dum nke mmịpụta mmiri ọkụ, okpukpu abụọ nke karama nchịkọta na ime ụlọ mwepụ
DRK-FX-306A Efere kpo oku
Efere karama seramiiki, ogo ikuku dị elu na igwe anaghị agba. (Igwe elu na mkpuchi Teflon anaghị eguzogide okpomọkụ dị elu; ọ bụ ezie na igwe anaghị agba nchara na-eguzogide ọgwụ dị elu, ọ dị mfe nchara).
DRK-ER Series nke eletriki na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ
★ 1.The ike mgba ọkụ dị ka Italy nakweere. ★ 2.The ọkachamara Ọdịdị imewe maximizes kpo oku ọsọ. ★ 3.The ọkachamara Ọdịdị imewe maximizes kpo oku ọsọ. 4.The ala mmeba ọnụọgụ nke iko-ceramik ana achi achi na agba n'elu adịghị deform n'okpuru elu okpomọkụ ọnọdụ. 5: 316L igwe anaghị agba nchara na-eji gburugburu ngwaahịa iji hụ na akụkụ ọ bụla nke igwe dum nwere ụfọdụ corrosion eguzogide. Emeputa nke electric kpo oku co ...
Igwe ọkụ eletrik mechiri emechi
1 importtali batara mgba ọkụ ngbanwe ike. Ihe a mechiri emechi na-ezere ọkụ na-emeghe ma melite ọkwa nchekwa. Igwe ihe ọkụkụ dị egwu iji zere njirimara na-emebi emebi nke brik ndị na-adịghị ọcha Ọkpụkpụ ọkụ na waya kpo oku na-emebi akara nke anwụ, nke na-eme ka arụmọrụ nke okpomọkụ dịkwuo mma
DRK-FX-D306 Sox Fatdị Ngwá Ọrụ Abụba
Ngwaọrụ na-ejikọ ọrụ ndị dị mkpa dị ka kpo oku na njikwa ọnọdụ okpomọkụ, mmịpụta, mgbake ihe mgbaze, na ihicha, na-eme ka ọ dị mfe ịme nyocha.
DRK-FX-D302 Jụrụ-Mmiri-Free Kjeltec Azotometer
Dabere na ụkpụrụ nke Kjeldahl usoro Azotometer ka etinyere na mkpebi siri ike nke protein ma ọ bụ ngụkọta nitrogen ọdịnaya, na ndepụta, nri, mkpụrụ, fatịlaịza, ala sample na na.
DRK-FX-836 Intelligent Graphite Digestion Instrument
Onye na-egweri nri bụ ihe eji arụ ọrụ maka nyocha ihe nyocha na ule. Mgbe nyocha nyocha na ule nyocha na gburugburu ebe obibi, nyocha ọrụ ugbo, nyocha ngwaahịa
Onye na-egweri nri bụ ihe eji arụ ọrụ maka nyocha ihe nyocha na ule. Mgbe nyocha nyocha na ule nyocha na gburugburu ebe obibi, nyocha ọrụ ugbo, nnweta ngwaahịa, na ngalaba nyocha mma, ihe ndekọ oge nhazi oge
DRK-FX-306 Igwe efere